- Page 83 of 270 - NEWS & MEDIA
2020 ခု နှစ် အတွက်သောက်သုံးရေပြတ်လျှင် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပတ်များ
2020 ခု နှစ် အတွက်သောက်သုံးရေပြတ်လျှင် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပတ်များ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းဘူးခရိုင်အတွင်း မင်းဘူး၊ ပွင့်ဖြူ၊ စလင်း၊ ငဖဲနှင့် စေတုတ္တရာ မြို့နယ်တို့ရှိ ကျေးရွာ ၉၆၃ တွင် နွေရာသီကာလ သောက်သုံးရေရှားပါး ပြတ်လပ်မှုဖြစ်ပေါ်ပါက ခရိုင်နှင့် မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရှိ တာဝန်ရှိသူများထံသို့ ဆက် သွယ် အ ကူ အ ညီ တောင်း ခံ နိုင် ကြောင်း သိ ရ သည်။ ကျေးလက်နေပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာအတွင်းနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ သောက်သုံးရေ ရရယူသုံးစွဲနေသော ရေအရင်းအမြစ်များမှ နွေရာသီကာလတွင် သောက်သုံးရေပြတ်လပ်မည့် အခြေ အနေများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းသိရှိရပါက …
အချစ်ကို ကိုးကွယ်မိတဲ့အခါ အခန့်မသင့်ရင် ဘာတွေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားရမှာလဲ …
အချစ်ကို ကိုးကွယ်မိတဲ့အခါ အခန့်မသင့်ရင် ဘာတွေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားရမှာလဲ … လူတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ အချစ်အတွက် ရူးရူးမိုက်မိုက် ပြုမူတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ အချစ်ကို ကိုးကွယ်မိတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျောက်ဆုံးစေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာမှ အစွန်းရောက်တာဟာ မကောင်းပါဘူး။ အစွန်းရောက်လွန်းအားကြီးရင်လည်း ပြုတ်ကျဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချစ်ပါ အချစ်ကို မကိုးကွယ်မိပါစေနဲ့။ အချစ်ကို ကိုးကွယ်မိတဲ့အခါမှာ ဒီလိုမျိုး ဆိုးကျိုးတွေကို သင်ခံစားလာရမှာပါ။ ကောင်းစွာ အိပ်မပျော်တာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သာမာန်ချစ်နေရုံကတော့ ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အလွန်အကျွံ စွဲလမ်းလာတဲ့အခါ အချစ်ကို ကိုးကွယ်မိတဲ့အခါမှာ စိတ်မချခြင်းတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတွေ များလာပြီး ညဘက်မှာ အတွေးတွေနဲ့ပဲ နပန်းလုံးနေတတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်က သင့်ကို …
သင့်ချစ်သူက တစ်ဘဝစာ လက်တွဲဖို့ထိရည်ရွယ်ထားလားဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက်များ
သင့်ချစ်သူက တစ်ဘဝစာ လက်တွဲဖို့ထိရည်ရွယ်ထားလားဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက်များ ဘ ဝ မှာ ကိုယ် တ ကယ် ချစ် ရ တဲ့ သူ က ကိုယ့် ကို လက် ထပ် ဖို့ ပါ ရည် ရွယ် ထား တယ် ဆို ရင် သင် ဟာ ဒီ လော က မှာ ကံ အ ကောင်း ဆုံး လူ သား တစ် ယောက် လို့ သတ် မှတ် နိုင် ပါ တယ် ။ သင့် …
အနေဝေးပေမယ့် အချစ်တိုးအောင် စမ်းကြည့်သင့်တဲ့ App ၅မျိုး…
အနေဝေးပေမယ့် အချစ်တိုးအောင် စမ်းကြည့်သင့်တဲ့ App ၅မျိုး… ချစ်တဲ့သူကို သတိရလွမ်းဆွတ်တဲ့အခါ တွေ့ချင်တိုင်းလည်း ပြေးတွေ့လို့မရတဲ့ခံစားမှုကိုအနေဝေးနေတဲ့ချစ်သူတွေပဲနားလည်ကြပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Apps လေးတွေကတော့ Metro ကတင်ပြထားတဲ့ အနေဝေးနေတဲ့ ချစ်သူတွေအချင်းချင်း သူနဲ့ကိုယ်နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေသလို ခံစားနိုင်စေမယ့် applications လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်နော်… 1. Couple စုံတွဲတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ app လေးဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ကိုယ်၂ ယောက်တည်းပဲရှိနိုင်တဲ့ app လေးဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုနဲ့ စာပို့တာတွေ၊ အရေးကြီးတဲ့ နေ့စွဲတွေမှတ်သားထားတာတွေ အားလုံးကို တနေရာတည်းမှာပဲ အကုန်သိမ်းထားလို့ ရမှာပါ။ ကိုယ်ပိုင် Timeline လေးတစ်ခုလဲ တည်ဆောက်နိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့အခါ ပြန်လည်ရှာဖွေရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ IOS မှာ ရော …
သင့်ကို လူချစ်လူခင် ပေါများစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း ( မေတ္တာပို့နည်း)
သင့်ကို လူချစ်လူခင် ပေါများစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း ( မေတ္တာပို့နည်း) သင် နံနက် အိပ်ယာထလို့ မျက်နှာသစ်တော့မယ် ရေကို စကိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ …၊ အဲ့လိုဘဲ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ …၊ သံဃံ သရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချပါ …၊ (ဆိုလိုတာကတော့ မေတ္တာမပို့မှီ သရဏဂုံ သုံးပါးကို အရင်ရွတ်လိုက်ပါ) အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ သွားတိုက်ချင်တိုက်ပါ သွားတိုက်ရင်း စိတ်ထဲက ဂုဏ်တော် ကိုးပါးကိုရွက်ရင် ပိုကောင်းပါတယ် …။ ကိုယ်ပြောတဲ့စကား အောင်စေပါတယ် …။ …
ချစ်သူကောင်မလေးဆီက ပုရိသတို့ လိုချင် မျှော်လင့်မိတတ်တဲ့အရာများ
ချစ်သူကောင်မလေးဆီက ပုရိသတို့ လိုချင် မျှော်လင့်မိတတ်တဲ့အရာများ ချစ်သူတွေဖြစ်လာပြီးလို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အပြန်အလှန် နားလည်ဖို့ ကြိုးစားလာကြတဲ့အချိန်မျိုးကို ကြုံဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်စိတ်ရဲ့အလိုကို တစ်ယောက်က မသိသေးတဲ့ အခါမျိုး ဖြစ်တာမို့ အခက်အခဲလေးတွေလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အခုကတော့ ကောင်လေးတွေရဲ့ ကောင်မလေးကို ထုတ်မပြောပဲ ရှိနေတတ်တဲ့ သူတို့လိုချင်တဲ့ အရာလေးတွေက ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ ပြောပြလိုက်ရပါတယ်နော်။ လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြတာမျိုး ကောင်လေးတွေအများစုက သူတို့ကောင်မလေး ဘယ်သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို ထုတ်ပြချင်တတ်ကြပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ကိုယ်ကောင်မလေးကို ထုတ်ကြွားချင်တတ်ကြတာမျိုးပါ။ စတွဲတာမကြာသေးလို့ မိန်းကလေးတွေကတော့ ချင့်ချိန်တတ်ကြပေမယ့် ယောကျာ်းလေးတွေမှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာ ဖြစ်စေ အသိမိတ်ဆွေတွေ အရှေ့ဖြစ်စေ လက်ကိုတွဲပြီးလမ်းလျှောက်ပြရတာကို ဂုဏ်ယူတတ်ကြပါသေးတယ်။ ဂရုစိုက်စေချင်တာ ဒီအကျင့်က မိန်းကလေးတွေမှာပဲ ရှိမယ်လို့ထင်ရင်တော့ မှားတယ်လို့ …
အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် (၂၀၂၀)ခုနှစ် အတွက် တစ်နှစ် စာ ဟော စာတမ်း…
အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် (၂၀၂၀)ခုနှစ် အတွက် တစ်နှစ် စာ ဟော စာတမ်း… ဤနှစ် တွင် အခက်ခဲမျှရှိစေကာ ဆောင်ရွက်စရာများ ရှေ့တိုး၍ ဆောင်ရွက်ရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးအနေ နဲ့ အခွမ်းအလမ်းသစ်များ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ စိတ်တည်ငြိမ်စွာ လုပ်ငန်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်လျှင် အောင်မြင်မည်။ လူမှု ဆက်ဆံရေးနှင့် စာပေဟောပြောပွဲ အပြောအဆိုမှားတတ်ခြင်း ကြုံတွေရတတ်သည်။ အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေများနှင့် စိတ်ဝမ်းကွဲ၊ စကားများငြင်းပွား ရတတ်သည်။ မမျော်လင့်သော အပြောင်းအလွှဲများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ အပြိုင်အဆိုင်ကြားမှာ မိမိပင်ကိုယ် ဉာဏ်စွမ်း ဇွဲလုံ့လ ဝိရီယ စွမ်းရည်ကြောင့် အတိုက်အခိုက်များ ကျော်လွှား၍ တိုးတတ်အောင်မြင်လာပါလိမ့်မည်။ မိသားစု အမွေအနှစ်ကိစ္စများ အဆင်ပြေလာနိုင်သည်။ မမျှော်လင့်ဘဲ ငွေကြေးများဝင်လာရခြင်း စက်ပစ္စည်း ဝယ်ယူခြင်းရှိမည်။ …
ကိုယ့်မွေးနေ့မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပန်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှုများ….
ကိုယ့်မွေးနေ့မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပန်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှုများ…. မွေးနေ့မှာ သင်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးသူတွေဆီက သင့်ကိုပေးလေ့ရှိတဲ့ လက်ဆောင်တွေထဲမှာ ပန်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းက ထူးခြားပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံမှုကို ပိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ကိုယ့်မွေးနေ့မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီက ပန်းလက်ဆောင်လေးပေးတာဟာ ဒီလိုစကားလေးတွေကို ပန်းပွင့်တွေနဲ့ ဖော်ပြလိုက်သလိုပဲ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာသူ့ဘဝအတွက် အရေးပါတဲ့သူ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုပန်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းက သင်ဟာသူ့ဘဝရဲ့ အရေးပါအရာရောက်တဲ့ သူတစ်ယောက်လို့ ဆိုလိုချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားရတဲ့သူ၊ ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုမှ ပန်းလက်ဆောင်ပေးတတ်ကြတာပါ။ အနီရောင်နှင်းဆီတွေဟာ သင့်ဟာ သူ့ဘဝရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သူ့ရှာဖွေနေတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ဆိုတာကို ဖော်ညွှန်းပါတယ်။ နင့်ကိုငါချစ်တယ် တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ဆီကို ပန်းတွေယူဆောင်လာခြင်းက ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်ပါတယ်။ ငါနင့်ကိုချစ်နေမိပြီ ဆိုတာကို စကားလုံးတွေနဲ့ မဖော်ပြပဲ သူယူဆောင်လာတဲ့ …
လူသိနည်းတဲ့ ပင်စိမ်းရွက်နဲ့ ပျောက်စေတဲ့ ရောဂါ အမျိုး (၄၀)
လူသိနည်းတဲ့ ပင်စိမ်းရွက်နဲ့ ပျောက်စေတဲ့ ရောဂါ အမျိုး (၄၀) ပင်စိမ်းပင်သည် မြန်မာနိုင်ငံနှံ့ အပြားတွင် ပေါက်ရောက်ပြီး အပူပိုင်းဒေသတွင် ပိုမို၍ ပေါက်တတ်ကြသည်။ မျိုးစေ့မှ တဆင့် အပင်စိုက်ရန် လွယ်ကူသော အပင် ဖြစ်သည်။ အရွက်နှင့် အစေ့ကို ဆေးအဖြစ် အများဆုံး အသုံးပြုကြသည် အရွက်မှာ သေးပြီးစိမ်းလျက် နူးညံ့၏။ ရွက်နားမှာ လွှသွားပုံ ရှိသည်။ အပွင့်ဖြူကလေးများ ပွင့်တတ်ကာ ရနံ့မှာ အလွန်မွှေးသဖြင့် အချို့သူများမှာ ယင်းချက် ရာတွင် အမွှေးနံ့ရစေရန် ဟင်းခတ်၍ အုပ်ကာ ချက်စားကြသည်။ အပွင့်များသည် အခိုင်လိုက် ပွင့်၍ ပွင်ချပ်များပေါ်တွင် အမွေးနု ကလေးများ ရှိသည်။ တပေါင်း တန်ခူးလများ၌ …
Previous 1 … 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 … 270 Next
This Year : 204826
Total Users : 499959
Total views : 2069162